Union Minister U Kyaw Tin attends IAMM, AUMM in NY – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Union Minister U Kyaw Tin attends IAMM, AUMM in NY
Myanmar’s Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin attended the Informal ASEAN Foreign Ministers’ Meeting — IAMM in New York, where he is attending the 73rd Session of the United Nations General Assembly (UNGA). The participants at the meeting discussed implementation of ASEAN Vision (2025), promoting relations with ASEAN and its dialogue partners and preparations for the 33rd ASEAN Summit and related meetings to be held in November in Singapore.
Following the meeting, Union Minister U Kyaw Tin attended the ASEAN Foreign Ministers’ Meeting with the UN Secretary-General and the President of the 73rd United Nations General Assembly-AUMM at the UN Headquarters at6pm local time. The meeting was attended by UN Secretary-General Mr. Antonio Guterres, presisent of 73rd UNGA Ms. Maria Fernanda Espinosa Garces and foreign ministers of ASEAN member countries. At the meeting, they exchanged views on promoting the relations between ASEAN and UN, stability and security, sustainable development and disaster management in ASEAN region.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၏ အလွတ်သဘော အစည်းအဝေးနှင့် အာဆီယံ-ကုလသမဂ္ဂ ဝန်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်
(၇၃) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံသို့ တက်ရောက်လျက်ရှိသော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ကိုယ်ခွဲခေါင်းဆောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ၂၈-၉-၂၀၁၈ ရက်၊ ၁၆၃၀ နာရီအချိန်တွင် ကုလသမဂ္ဂ ဌာနချုပ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၏ အလွတ်သဘော အစည်းအဝေး (Informal ASEAN Foreign Ministers’ Meeting – IAMM) သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံ မျှော်မှန်းချက် (၂၀၂၅) အကောင်အထည်ဖော်မှု အခြေအနေများ၊ အာဆီယံ၏ ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များနှင့် လာမည့် နိုဝင်ဘာလတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည့် (၃၃) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများအတွက် ကြိုဆင်ပြင်ဆင်ထားရှိသည့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ၁၈၀ဝ နာရီအချိန်တွင် ကုလသမဂ္ဂ ဌာနချုပ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အာဆီယံ-ကုလသမဂ္ဂ ဝန်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေး ( ASEAN Foreign Ministers’ Meeting with the UN Secretary-General and the President of the 73rd United Nations General Assembly- AUMM) သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် Mr. Antonio Guterres၊ (၇၃) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ သဘာပတိ Ms. Maria Fernanda Espinosa Garces နှင့် အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး၊ အာဆီယံနှင့် ကုလသမဂ္ဂအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေး၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေး အမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။